मेरो खोज इन्जिन अनुकूलन को लागी मेरो साइट को बारे मा जानने को आवश्यकता के हो मलाई सफल हुन को लागी?
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ एसईओ को अर्थ? निस्सन्देह, हामी प्रायः Google मा यो शब्दको सामान्य परिभाषा पढ्न सक्छौं. यद्यपि, एसईओले विभिन्न चीजहरू फरक मानिसहरूलाई बुझाउँछ. जबकि केहि वेबसाइट मालिकहरु को विज्ञापन च्यानल को अनुकूलन सफ्टवेयर को माध्यम ले खोज इन्जिन संग एक सम्बन्ध को प्रबंधन को रूप मा अनुकूलन को शब्द को रूप मा अनुकूलन को रूप मा, अन्य एसईओ ले अनुकूलित सामाग्री निर्माण र लिंक इमारत को रूप मा.
वास्तविकता मा, एसईओ सार को समझने को लागि, आपको यस क्षेत्र मा केहि अनुभव हुनु पर्छ. खोज इञ्जिन अनुकूलन गुणस्तर र अनूठा सामग्रीको संयोजन हो, प्राविधिक आधारभूतहरू (वेबसाइट कोडिङ र भित्री ढाँचा), प्रयोगकर्ता Google मा डोमेन र प्राधिकारीसँग उत्तम अनुभव छ।. त्यहाँ 200 भन्दा बढी गुगल मानकहरू छन् जुन तपाईले तपाईको साइट भिजुअल उपस्थिति सुधार गर्दा पछ्याउन आवश्यक पर्दछ. वेबसाइट अनुकूलन अभियान निर्माण को लागी यी सबै मापदंडों को विचार गरेर, तपाईं खोज इन्जिन देखि लक्षित यातायात को आकर्षित गर्न र खोज परिणामों को शीर्ष मा प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछन्।.
आउनुहोस् हामीलाई खोज इंजन अप्टिमाइजेसनको लागि सफल हुन को लागी तपाईको साइटको बारेमा के विचार गर्न आवश्यक छ.
साइट अनिवार्य तपाईलाई राम्रो एसईओ
धेरै वेबमास्टरहरूको लागि विचार गर्न आवश्यक छ कि सम्पूर्ण पृष्ठमा खोजी अनुसन्धान र उनीहरूको सही स्थान निर्धारण. यद्यपि, यदि तपाइँका शब्दहरू अप्टिमाइजेसनमा काम गरिरहनु भएको छ तर अझै पनि दृश्यात्मक नतिजाहरू छन् भने तपाईले अन्य कारकहरू विचार गर्न सक्नुहुनेछ जसले एसईओ रेटिङलाई असर गर्छ।.
Google एल्गोरिथ्मले केवल तपाईंका खोजशब्दहरू प्रासंगिकता र मेटाडाटा अप्टिमाइजेसन नगर्ने मात्र होइन तर यो तथ्याङ्कको मूल्यांकन गर्दछ जस्तै औसत समय प्रयोगकर्ताहरूले तपाईंको साइट खर्च गर्छ, पृष्ठहरू उनीहरूले हेर्छन्, उछाल दर, अनुपलब्ध पेजहरु, बिस्तार लिङ्कहरू र यति.
रूपान्तरित दर बढाउने र प्रयोगकर्तालाई तपाईंको साइटमा रहन एकमात्र तरिका हो कि तपाइँको साइटको साथ उनीहरूको अनुभव सुधार्नु हो।. प्रयोगकर्ताको अनुभव एक महत्त्वपूर्ण Google रैंकिंग कारक हो, तपाईलाई आफ्नो समय को एक महत्वपूर्ण अनुपात को फोकस गर्न र तपाईंको साइट बनाउन को लागी सजिलै संग नेविगेट गर्न को लागी प्रयास गर्दछ र केहि क्वेरी को अधिकतम भन्दा प्रासंगिक.
प्रयोगकर्ताहरूको अनुभव सुधार गर्न र तपाईंको साइट एसईओ-अनुकूल बनाउनुहोस्, निम्न साइट इञ्जिन अनुकूलन प्रविधिलाई विचार गर्नुहोस्.
तपाईंको वेब पृष्ठ प्रयोगकर्ताको उपकरणको आकार राम्रो प्रतिक्रियाको जवाफ दिनै पर्छ।. भर्खरै Google अद्यावधिक पछि, वेबसाइट प्रतिवेदन एक जरूरी एसईओ प्रविधी बन्यो जुन अनलाइन व्यापार सफलता संग सम्बन्धित छ. तपाईंले मोबाइल र ट्याब्लेट उपकरणहरूमा साइटहरूको इष्टतम लेआउट प्रदान गर्न आवश्यक छ जुन अन्यथा वेब पेजको डेस्कटप संस्करणको रूपमा देखा पर्दछ.
एक उत्तरदायी डिजाइन सिर्जना गरेर, तपाईंले आफ्नो संभावित ग्राहकहरु को सबै भन्दा ठूलो रकम को लागी मोबाइल उपकरण बाट बनेको खोज को लक्ष्य को लक्ष्य प्राप्त गर्न को लागि प्राप्त गर्दछ।. यदि तपाइँ नयाँ वेबसाइट बनाउनुहुन्छ भने, रेटिङ सुधार गर्न र थप आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्न यसको लागि उत्तरदायी हुन आवश्यक छ. यदि तपाईंको हालको वेब पेज उत्तरदायी छैन भने, तपाईं प्रतिक्रियाशीलता पुन: प्राप्त गर्न वा मोबाइल-अनुकूल प्लगइन स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ.
. एक वेबसाइट पहुँच सबै छविहरूमा राम्रो-अनुकूलित ALT ट्यागहरू आवश्यक पर्दछ. यसले तपाइँलाई तपाइँको सामग्रीको बारेमा सबै प्रयोगकर्ताहरू बताउन मद्दत गर्नेछ र तपाईंको साइट पछि संलग्न गर्न मद्दत गर्नेछ. साथै, पहुँच हेडर ट्यागहरूको उचित उपयोगको बारेमा सबै हेडरको लागि H1 र उप-हेडरहरूको लागि H2 को बारेमा उपयुक्त छ. यी ट्याग सामग्री संरचना गर्न मद्दत गर्दछ र यसलाई दुवै खोजी बटहरू र पाठकहरूका लागि क्रल गर्न सजिलो बनाउँदछ.
यस्तो नेभिगेसन सुविधाको रूपमा ब्रेडक्रम्बहरू असक्षम प्रयोगकर्ताहरूलाई सहयोग पुर्याउँदछ र उनीहरूलाई तपाईंको साइटको पदानुक्रममा कहां छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ।. साथै, एक गुणस्तर स्थापित साइटमैपले सबै प्रयोगकर्ताहरू र खोजी इञ्जिनहरूलाई तपाईंको साइटको पूर्ण दृश्य प्राप्त गर्न सक्षम गर्दछ Source .